आफ्नै छोराले बुहारीको हत्या! रगत चुहाउँदै जब आमाको कोठामा आइपुगे (भिडियो) - सुदूर नेपाल
आफ्नै छोराले बुहारीको हत्या! रगत चुहाउँदै जब आमाको कोठामा आइपुगे (भिडियो)
Dinesh khaptadi May 15, 2019 0
घटनास्थल हेर्दा एउटा प्रहरी अधिकारीकै आङ सिरिङ हुन्छ भने सर्वसाधारणलाई कस्तो लाग्दो हो घटना हो ललितपुरको ढोलाहिटीमा भएको अञ्जना महत हत्या । प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्दा उनको टाउकोकाे थोरै छाला मात्रै शरीरमा अड्किएको थियो । खुट्टाले भुइँ छोए पनि आधा शरीर खाटमै थियो । कोठामा रगतको आहाल थियो । अञ्जनामाथि कतिपटक हतियार प्रहार गरियो भन्ने लख काट्नसमेत मुस्किल छ । खुला रुपमा देखिने खत त कति हो कति !कपडा पनि अधिकांश ठाउँ काटिएका थिए । घटनास्थल पुगेका प्रहरी अधिकारीहरु आफैं प्रतिप्रश्न गर्छन्कसरी मानिस यो हदसम्म पनि जान सक्छ ?
तर प्रहरीको कामै अपराध अनुसन्धान गर्ने हो । जस्तो अवस्था भएपनि अनुसन्धान गर्नैपर्छ । त्यसैले प्रहरीले प्रारम्भिक जाँच मुचुल्का तयार पारे र लाशलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाउने तारतम्य मिलाए । ढोलाहिटी चोकबाट एक सय मिटर पर रहेको घरमा त्यो दिन आमा पुष्पा बुहारी अञ्जना र जेठाजु उज्वल मात्रै थिए । बुबा कमलबहादुर र अञ्जनाका पति प्रज्वल विहानै काममा निस्किएका थिए ।
दिउँसो करिब साढे दुई बजेतिर उज्वल दौडिँदै आमा भएतिर आए । छोरा हल्ला गर्दै आएपछि तल्लो तलामा सुतेकी उनी ब्युझिइन् । पुलिस बोलाइदिनू परैबाट पुष्पाले आवाज सुनिन् । उनले छोराको कुरा बुझिनन् । पानी आएछ कि क्या हो भनेर सोधेँ पन उनी सम्झिन्छिन्तर जब ऊ मेरो कोठामा आयो त्यसपछिको अवस्था म कल्पना समेत गर्न सक्दिन ।रगतैरगतले लतपतिएको हातमा खुकुरी बोकेर उनी तल झरेका थिए । मैले त्यसलाई मारिदिएँ उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै आमा भन्छिन्पुलिस बोलाइदिनू । जब उनी बुहारीको कोठामा गइन् तब विभत्स हत्या देखिन् । लगत्तै प्रहरीलाई खबर गरियो ।शरीरमा पटकपटक खुकुरी प्रहार गर्दा न त घरमै रहेकी आमाले थाहा पाइन् न छिमेकीले । निद्रामा मस्त भएकाले आफूले केही थाहा नपाएको उनी बताउँछिन् । प्रहरीलाई खबर हुनेवित्तिकै नजिकै रहेको सीआरभी टोली पुग्यो र घटनास्थललाई घेरा हाल्यो ।palpalkakhabar.com
Previous Post: होसियार ! यी ३ गल्तीले बिगार्छ तपाइँको दाँत ,जोगाउन के गर्ने ?
Next Post: आफ्नो मुटुको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने यि ५ मसलाको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ-भिडियो